ုknowledge – Nya Hmwe Pann
admin cele, hot news, international news, news, popular, ထူးဆန်းထွေလာ,ုknowledge October 31, 2019
မိန်းမ ၁၃ ယောက်ယူထားပြီး တစ်ပြိုင်နက် ကိုယ်ဝန်ရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အာဂအမျိုးသား မိန်းမ ၁၃ ယောက်ယူထားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ကိုယ်ဝန်ရစေပြီး သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ကလေးဖြစ်လာမယ့် ကလေး ၁၃ ယောက်မွေးဖွားလာဖို့ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ အမည်မသိရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့အတူ မွေးခါနီးဖွားကာနီး ဗိုက်စူထွက်နေတဲ့ အမျိုးသမီး ၁၃ ဦး တူယှဉ်တွဲကာ ပြုံးပြုံးရွှင်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံက အတော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ ဇနီးသည် ၁၃ ယောက်လုံးရဲ့ မွေးဖွားမယ့်လကလည်း အတူတူပဲ ဖြစ်လို့ ဒီလိုအားလုံး တစ်လထဲအတူတူ Read more…
ရုရှနိုင်ငံဟာ ၎င်းရဲ့ နောက်မျိုးဆက် SU-57 ဝေဟင်ပိုင်စိုး တိုက်လေယာဉ်တွေအတွက် အဝယ်အမှာစာတွေ အများအပြား ရရှိနေပါတယ်။ ဒီ မျိုးဆက်သစ်လေယာဉ်တွေကို ၂၀၂၅ မှာ အစီးရေ ရ၀ ဖြန့်ကြက်နိုင်ဖို့ ရုရှနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လကစပြီး အများအပြား ထုတ်လုပ်နေတာပါ။ ဒီအတွက် ကြီးမားတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကို ကာမိအောင် ပြည်ပကို ရောင်းချပြီး စရိတ်ကာမိအောင် ဖော်ဆောင်ဖို့ ရုရှနိုင်ငံက ကြိုးစားလာပါတယ်။ SU-57 တိုက်လေယာဉ်တွေဟာ လေကြောင်းထိုးစစ်အပြင် သင့်တော်တဲ့ ဒုံးတပ်ဆင်ပြီး ရေပြင်ထိုးစစ်ပါ ဆင်နွှဲနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မြင့် ဂျက်လေယာဉ်တွေ Read more…
“နှမြောလိုက်တာလို့ တွေးမိတဲ့အချိန်မှာ သိပ်နောက်ကျသွားပြီ”
admin သုတ,ုknowledge October 30, 2019
“နှမြောလိုက်တာလို့ တွေးမိတဲ့အချိန်မှာ သိပ်နောက်ကျသွားပြီ” ဘဝကို နောက်ဆုံးအချိန်ထိ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ တန်ဖိုးရှိရှိ ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်.. အဲ့ဒီလို မသိလို့ရှိရင် အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါ ကြာလေ အသုံးမကျလေ ဖြစ်လာတယ်.. ဘယ်ဟာအရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုတာ သိဖို့အင်မတန်လိုတယ်နော်.. အရေးမကြီးတာတွေဟာ အရေးကြီးသယောင်ယောင်နဲ့ ကိုယ့်ဘဝထဲက အချိန်တွေအကုန်လုံးကို ယူသွားနေတာ အချိန်က မကျန်တော့ဘူး.. တစ်ကယ်အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်ဖို့ အချိန်သိပ်နည်းနေတယ်.. နောက်ဆုံးသေခါနီးမှာ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ စာရင်းချုပ်လိုက်မယ် ဆိုပါတော့- “ငါ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ?” “ဘယ်သူ့အတွက် လုပ်ခဲ့သလဲ?” “ငါ လုပ်ခဲ့သမျှအားလုံးဟာ သူများဖို့ပဲ” “သူများအထင်ကြီးဖို့ Read more…
admin သုတ,ုknowledge
လူခငျြးတူပမေယျ့ ကံခငျြးမတူကတြဲ့အခါမှာ လူခငျြးတူပမေယျ့ ကံခငျြးမတူကတြဲ့အခါမှာ ရပိုငျခှငျ့တှဟောလညျး မညီမမြှ ဖွဈတတျတယျ။ သူ့ကံနဲ့ ကိုယျ့ကံယှဉျကွညျ့လို့ ပစ်စုပ်ပနျကံခငျြး တူနရေငျတောငျမှ အတိတျကံ အားကောငျးခဲ့တဲ့လူက ရပိုငျခှငျ့ ပိုအားကောငျးတယျ။ သူကတော့ ဒီလောကျကွီးရတယျ။ ငါကတော့ ဒီလောကျလေးရတယျ။ သူကတော့ ဦးစားပေးခံရတယျ။ ငါကတော့ နောကျခနျြခံရတယျ။ ဒီလိုအတှေးတှနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို လူတိုငျးနဲ့လိုကျပွီး တနျးညှိမနပေါနဲ့။ တဈခါတလမှော လူတှဟော ကိုယျ့ကိုယျကို အခွားလူနဲ့ယှဉျပွီး စိတျကွီးဝငျနတေတျကွသလို တဈခါတလကေတြော့လညျး စိတျအားငယျနတေတျပွနျရော… နညျးသညျဖွဈစေ မြားသညျဖွဈစေ … ဆိုးသညျဖွဈစေ ကောငျးသညျဖွဈစေ … Read more…
” ကိုယျ့ကိုယျကိုခဈြရငျ ” (အရမျးကောငျးတဲ့စာလေးမို့ သမီးလေးတို့ ဖတျဖွဈအောငျဖတျကွညျ့ပါ)
” ကိုယျ့ကိုယျကိုခဈြရငျ ” (အရမျးကောငျးတဲ့စာလေးမို့ သမီးလေးတို့ ဖတျဖွဈအောငျဖတျကွညျ့ပါ) ” ကိုယျ့ကိုယျကိုခဈြရငျ ” “If you love yourself….” ၁) မနကျအိပျယာနိုးတိုငျး ငါအသကျရှငျနပေါသေးလားလို့ ဘုရားကို ကြေးဇူးတငျပါ။ When you wake up every morning, be grateful that you are alive. ၂) ရငျထဲဘာတှခေံစားနရေပါစေ အိပျယာကထ အ၀တျအစားသပျသပျရပျရပျဝတျ သှားဖို့တာဝနျရှိတဲ့ နရောကို ရောကျအောငျသှားပါ။ Regardless of how Read more…
စိတျဓာတျကတြိုငျးဖတျဖို့ ယူထားလိုကျပါ သမီးလေး
စိတျဓာတျကတြိုငျးဖတျဖို့ ယူထားလိုကျပါ မိတျဆှေ လိုခငျြတာတှမြေားနရေငျ _ရငျမောရတတျတယျ.. ဖွဈခငျြတာတှမြေားနရေငျ _စိုးရိမျနရေတတျတယျ.. မြှျောလငျ့တာတှမြေားနရေငျ _ပူပနျနရေတတျတယျ.. မလိုအပျတဲ့အရာတှကေိုလညျး_ မခငျတှယျမိစနေဲ့.. စိုးရိမျသောကတှကေိုလညျး_ လိုအပျတာထကျမပိုနဲ့.. မဖွဈသေးတဲ့ကိစ်စကိုတှေးပွီး_ သောကမရောကျပါနဲ့. လောကဓံဆိုတာ… မလိုခငျြတာတှလေညျး_ ရလာတတျတယျ… မဖွဈခငျြတာတှလေညျး_ ဖွဈလာတတျတယျ.. မမြှျောလငျ့တာတှလေညျး_ ကွုံလာရတတျတယျ….။ ကိုယျလိုခငျြတာတှမေရလို့လညျး_ စိတျညဈမနပေါနဲ့” ကိုယျမလိုခငျြတာတှရေပွီး စိတျညဈနရေတဲ့သူတှလေောကွီးမှာ ဒုနဲ့ဒေးရှိနပေါတယျ….။ ”အတိတျကရခဲ့တဲ့ နာကငျြစရာတှကေို မလေို့ကျပါ” ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီကရလိုကျတဲ့ သငျခနျးစာတှကေိုတော့ ဘယျတော့မ မမေ့ပဈလိုကျပါနဲ့….။ ”ရငျ့ကတျြမှုတှရေဖို့ မကျြရညျတှနေဲ့ ရငျးခဲ့ရတယျ”.. ”ခှငျ့လှတျတတျဖို့ သညျးခံစိတျတှေ Read more…
မိနျးမသားတဈယောကျရဲ့ ဖှငျ့ဟဝနျခံခကျြ ကျွန်မ ဒီစာကို ရေးဖို့ မျက်ရည်တွေ အများကြီး ရင်းခဲ့ရတယ် အချိန်တွေအများကြီး ရင်းခဲ့ရတယ် သင်ခန်းစာပဲယူယူ အပျင်းပြေပဲ ဖတ်ဖတ် ဒါ ကျွန်မရဲ့ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်တစ်ခုပါ ခေါင်းစဉ်ထပ်တပ်ရရင် မိန်းမသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်ပေါ့ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ အဲ့ဒီလူရဲ့ အချစ်ကို အကုန်လိုချင်တယ် ဒါ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တပါ ဂရုစိုက်တာ အလေးထားတာ အင်မတန်လိုချင်တယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပြောပြမှ လိုက်လုပ်ပေးတာမျိုးကျတော့ မလိုချင်ပြန်တော့ဘူး ဒါကို အပြောင်းအလဲ မြန်တယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြတယ် မဟုတ်ဘူး Read more…
ကိုးနဝငျး အဓိဌာနျ ပုတီးစိတျနညျး ကိုးနဝငျး မိုးလငျးမှသိမယျ
admin ဘာသာရေး, သုတ,ုknowledge
ကိုးနဝငျး အဓိဌာနျ ပုတီးစိတျနညျး ကိုးနဝငျး မိုးလငျးမှသိမယျ ၁။ ဂုဏျတျောကိုးပါးဖွငျ့ လောကီအကြိုးစီးပှားအောငျမွငျဖွဈထှနျးစသော အဓိဌာနျ ဖွဈသညျ။ ၂။အဓိဌာနျ အဆငျ့ ၉ ဆငျ့ပါရှိပါသညျ။ တဆငျ့လြှငျ (၉)ရကျနှုနျးဖွငျ့ (၈၁)ရကျ ဝငျရမညျ့အဓိဌာနျ ဖွဈပါသညျ ။ တဈဆငျ့လငျြ သငျ၏အရေးကွီးဆုံး ကိစ်စတဈခုကို ဆုတောငျးနိုငျပါတယျ ။ ၃။ အဓိဌာနျ အဆငျ့ (၉)ဆငျ့အောငျမွငျနခြေိနျ တှငျ သငျ၏ဆုတောငျးမြား အံ့သွဖှယျရာ ပွညျ့ဝနလေိမျ့မညျဟု ရဲရဲကွီး ယုံကွညျပါ။ သငျလညျးဝငျဖွဈအောငျဝငျပါ။ သငျ့မိသားစုကိုလညျး ဝငျရနျတိုကျတှနျးပါ။ ၄။ဖျောပွထားသော ဂုဏျတျောအမှတျစဉျအတိုငျးစိပျပါ Read more…